Hlola i-Honolulu, Usa - World Tourism Portal
Hlola i-Honolulu, e-USA
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Honolulu, Usa
Okufanele ukwenze Honolulu
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Honolulu
Bukela ividiyo ekhuluma nge-Honolulu
Hlola Honolulu on isiqhingi sase-Oahu, inhloko-dolobha nedolobha elikhulu kunazo zonke lesifundazwe Hawaii. Kuyisikhungo sikahulumeni, ezokuhamba, nezentengiselwano zombuso; ikhaya labantu cishe isigidi esisodwa endaweni kamasipala (i-80% yabantu besifundazwe) nendawo yezivakashi eyaziwa kakhulu yiHawaii, iWaikiki Beach. E-2015, i-Honolulu yabalwa njengenye yamadolobha aphephe kakhulu e-United States.
Downtown inhliziyo eyingqophamlando yedolobha, ikhaya kuyi-capitol yombuso, iminyuziyamu eminingana, umphambili wetheku, kanye nendawo yokuhweba yeziQhingi zaseHawaii.
Waikiki yisikhungo sabakhenkethi saseHawaii: amabhishi anesihlabathi esimhlophe, izixuku zabasakazi kanye nemicibisholo yelanga, nebhlokhi ngemuva kwebhulokhi yamahhotela aphezulu.
UManoa-Makiki indawo ethule ezansi emaphethelweni asezansi enyakatho yeDowntown, ekhaya leNyuvesi yaseHawaii eManoa, iNational Memorial Cemetery yasePacific emgodini wePunchbowl, kanye nendawo ezishisayo yezintaba zaseKoolau ngemuva kwedolobha.
I-Eastern Honolulu indawo ehlala iningi elihlala eMakapu'u Point, yona kanye indawo eseningizimu-mpumalanga yesiqhingi kanye nasekhaya ezindaweni ezinamadwala, emabhishi anendawo enhle, nendawo enhle yezinyoni uHanauma Bay.
I-Western Honolulu kungenye indawo enkulu yokuhlala, ikhaya lesikhumulo sezindiza, iBishop Museum, kanye nezikhumbuzo zezempi zePearl Harbour.
Igama elithi Honolulu lisho "indawo evikelekile" noma "ukuthula kwendawo yokukhosela" eHawaii, futhi itheku lawo elingokwemvelo lathatha lo muzi othobekile ngokubaluleka lapho, e-1809, kungekudala nje lapho iKing Kamehameha I yahlula i-Oahu ukuze ihlanganise iziQhingi zaseHawaii ngaphansi koMbuso Hawaii, ukuthi asuse inkantolo yakhe yasebukhosini esuka esiqhingini saseHawaii ayisa e-Oahu. Ekugcineni, e1845, uKamehameha III wasusa ngokusemthethweni inhlokodolobha yombuso isuka eLahaina eMaui yaya eHonolulu.
Isikhumulo esisezingeni elifanele sase-Honolulu senza idolobha laba yindawo efanelekile yokuhamba ngemikhumbi yabathengi ehamba phakathi kweNyakatho Melika ne-Asia, futhi ngama-1800s, inzalo yezithunywa zevangeli ezafika ekuqaleni kwama-1800 yasungula indlunkulu yazo e-Honolulu, okwenza kwaba isikhungo sebhizinisi kanye netheku elikhulu iziqhingi zaseHawaii.
I-Honolulu inesimo sezulu esiphansi impela, esishisayo, esinokushisa okuncane kakhulu unyaka wonke.
I-Honolulu International Airport iyisango lendiza eliphambili leziQhingi zaseHawaii. Inamaphethelo amabili: i-Inter-Island ne-Main.
Isimo sezulu esishisayo sonyaka wonke saseHawaii sinikeza isimo sezulu esifanelekile unyaka wonke, ngakho-ke ulethe izicathulo zakho zokugijima. IKapiolani Park ne-Ala Moana Beach Park lapho iningi lamajigger e-Honolulu lihlangana khona; i-4-mile loop ezungeze iDiam Head Head nayo iyindlela ethandwayo nenobuhle. Uma ufuna inselelo, iTantalus Drive ngenhla iMakiki iyindlela evumelana nemigwaqo emibili, ephephe kakhulu kwababambe emjahweni. I-Honolulu Marathon, ebanjwa minyaka yonke ngeSonto lesibili ngoDisemba, ingumcimbi omkhulu oheha abagijimi be20,000-25,000 minyaka yonke.
Ukuhamba ngebhayisekili ezungeza imigwaqo ye-Honolulu kanye nezindlela zamabhayisekili kungaba yindlela enhle yokubona idolobha futhi lihlale lisesimweni. Kukhona izitolo eziningana zamabhayisekili edolobheni eziqasha izinhlobo ezahlukene zamabhayisekili. Ungathatha futhi i-Highway 72 uye e-Waimanolo, empumalanga ye-Honolulu, uma ufuna ukuphuma ngomgwaqo ovulekile.
I-Ice skating mhlawumbe yinto yokugcina obungayilindela ukuthi ikwazi ukukwenza edolobheni elishisayo, kepha i-Ice Palace eNtshonalanga Honolulu yenzela ukuthola iholidi elifanele uma isimo sezulu esishisayo sikhulu kakhulu kuwe.
Kunamabhishi amahle okushweza ngapha nangapha eWaikiki. Izifundo, abafana basolwandle banikeza izifundo zangasese zokushiswa ngasese nsuku zonke eWaikiki Beach. Isifundo sehora elilodwa sifaka umhlaba owomile nemiyalo emanzini. Abafundisayo bafundisa ukuqeqa ngamadolo, isikhathi nesikhathi namakhono okulinganisa. Akukho ukubhuka okudingekayo, vele ubhalise esitobhini ebhishi esiseDiamhead of the Waikiki Police Station. Ungazama futhi esinye sezikole eziningi eziseWaikiki.
Kukhona futhi amathuba wokuhlwitha nokujikijela kwe-scuba kuwo wonke amazinga (abaqalayo kufakiwe).
Ngaphezu kwemibukiso yendabuko ye-luaus nemidlalo ye-hula, iHawaii inendawo echumayo yaseshashalazini, amakhonsathi, amaklabhu, imigoqo, neminye imicimbi kanye nokuzilibazisa. I-Honolulu inezindawo ezimbili zemidlalo yaseshashalazini. Elidala nelidume kunazo zonke yiDiamond Head Theatre. Bebelokhu bejabulisa ababukeli ngokusebenza kwezitayela ezibanzi ukusukela nge1919, futhi babizwa nge- "The Broadway of the Pacific". Enye indawo yaseshashalazini yiHawaii Theatre eDowntown Honolulu. Benze imisebenzi efanayo naleyo ye-Diamond Head Theatre futhi bebelokhu benza kusukela nge1922. Eminye imisebenzi ibanjelwe eNeil S. Blaisdell Arena naseConsert Hall, naseWaikiki Shell.
Kunezindawo zokuthenga eziningana e-Honolulu, ezisukela kumakamishi akho amakhulu strip aya ezindaweni ezihlukile kakhulu ezithandwa abavakashi. Indawo yamakethe yamazwe omhlaba eWaikiki enye yezindawo ezinjalo, igcwele izitolo zemakethe nezitolo ezibekwe phakathi kwendawo yezihlahla ezinjengamahlathi. Futhi eWaikiki kukhona iRoyal Hawaiian Shopping Center, i-DFS Galleria (Izitolo Ezikhululekile ZaseDuty), kanye neWaikiki Shopping Plaza, ethandwa kakhulu ngabavakashi.
IDowntown inezindawo ezimbalwa zokuthenga. Imakethe ye-Aloha tower ethekwini elingaphambi kwe-Aloha tower iyathandwa izivakashi. Phakathi kweDowntown neWaikiki kukhona i-Ala Moana Center, okuyindawo enkulukazi yezitolo eHawaii nesikhungo esikhulu kunazo zonke esivulekile sokuthenga emhlabeni. Kukhona nezikhungo zeVictoria Ward. Kokuthile okuyingqayizivele ngempela, iChinatown inezimakethe zokudla nezasolwandle, kanye nabenzi abaningi beLei (umhlobiso ogeleza umgexo) emakhoneni emigwaqo.
I-Eastern Honolulu inezindawo ezimbalwa zezitolo ezinkulu, iKahala Mall kanye neKoko Marina Center, enezitolo ezinkulu ezinkulu nezinkundla zemidlalo yama-movie. EWestern Honolulu, i-Aloha Stadium iyikhaya le-Aloha Stadium Swap Hlangana njalo ngoLwesithathu, ngoMgqibelo nangoSonto, futhi inika ithuba lokuthenga kubathengisi nabadwebi bendawo futhi uthole izinto ngemali eshibhile kakhulu kunalokho ongakuthola kwenye indawo.
Kunezindawo eziningana ezivulekile kuze kube yi2AM. Ezinye zivulekile kuze kube yi4AM. Amabha amaningi we-Honolulu nemishayo yasebusuku angatholwa ku-Kuhio Avenue futhi ambozwe embhalweni we-Waikiki.
Hlola i-Honolulu, Usa futhi ungachithi sonke isikhathi sakho ku-Waikiki Beach. Isiqhingi sase-Oahu, sinamabhishi acashile athe xaxa, amathuba okuhamba ezintabeni, kanye nokubona amagagasi amakhulu ebusika, okulindele. Iningi lezinto ezithandwa kakhulu yilesi siqhingi lingabonakala ohambweni losuku, noma lusakaze ngaphezulu kwezinsuku ezimbalwa.